E-Journal: October 2008
ခံစား၊ ဝေမျှ၊ တင်ပြသူက တားမြစ် ထားသော... at 6:57 PM 18 comments
Data လိုလို့CD အဟောင်းတွေပြန်ကြည့်ရင်းနဲ့ 
ပြန်တွေ့ တာနဲ့ Movie လေးလုပ်ပြီးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်....
အကုန်လုံးကို Internet ကနေယူထားပေမဲ့
ခံစား၊ ဝေမျှ၊ တင်ပြသူက မယ် at 5:36 PM2comments
ဒီကဏ္ဍအောက်မှာ ဖတ်အုံးမယ်ဆိုရင် Asterisk, ဝေမျှခြင်း သီချင်းများ
ခံစား၊ ဝေမျှ၊ တင်ပြသူက တာတူး(၀ါ) အမေ့ခံလူတစ်ယောက် at 9:23 PM 10 comments
ခံစား၊ ဝေမျှ၊ တင်ပြသူက Rhyme at 5:01 PM7comments
ခံစား၊ ဝေမျှ၊ တင်ပြသူက အခြား at 10:55 AM 14 comments
ဒီတစ်ခါတော့ အဖေ့ရဲ့ကဗျာ တစ်ပုဒ်ကို ထုံးစံအတိုင်း ကျနော်မှတ်မိသလို ဝေမျှပါရစေ။
ဒီကဗျာလေးဟာ ကျနော်ထက် အသက်ကြီးတာ သေချာပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဘယ်လောက်ထိအောင် ကြီးလည်းတော့ ကျနော်မသိပါ။
E-Journal မှာ အမေရဲ့ ကဗျာတွေကို အရေအတွက်တစ်ခုထိ မျှဝေခဲ့ပြီး ဖြစ်ပေမယ့် အဖေ့ရဲ့ကဗျာ တစ်ပုဒ်သာ မျှဝေရပါသေးတယ်။
တစ်ကယ်တော့ ကျနော်တို့တစ်မိသားစုလုံးဟာ အဖေ့ကြောင့်သာ စာပေအနုပညာနဲ့ အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ နီးစပ်မှုရှိခဲ့ကြတာပါ။ မဝင့်မဝါပြောရရင် ကျနော်တို့မြို့ကလေးတစ်ဝိုက်က လူတော်တော်များများအဝင်အပါလို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။ အဲဒီအတွက် အဖေဟာ တစ်ဘဝလုံးပေးဆပ်ထားခဲ့တာပါ။ အဖေ့ရဲ့ ဘဝဆိုတာ ကျနော်တို့ တစ်မိသားစုလုံးပါ။
ဒီအဖေ၊ ဒီအမေရဲ့သားဖြစ်ရတာကို ကျနော်ဘယ်အရာနဲ့မှ မလဲနိုင်ပါ။
ခံစား၊ ဝေမျှ၊ တင်ပြသူက Anonymous at 5:51 PM6comments
မျှော်လင့်ထားခဲ့တာနဲ့ ဆန့် ကျင်ဖက်တွေပဲ…
အရိုးသားဆုံးဝန်ခံရရင် အဲဒီအချိန်တုံးက နှလုံးသားကိုပဲအားကိုးခဲ့ပြီး
အဲဒီကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီးရလာမဲ့ရလဒ်က အကောင်းဆုံးဖြစ်နိုင်မဖြစ်နိုင်ဆိုတာကိုသေချာမစိစစ်မိခဲ့ဘူး…
အဲဒီကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ခဲ့ဖူးတဲ့ဇစ်မြစ်တွေကို သေချာမဆန်းစစ်ခဲ့မိဘူး…
အကောင်းဆုံးတွေရနိုင်မရနိုင်ဆိုတာကိုသေချာမတွက်ဆခဲ့လိုတာ အကောင်းဆုံးဆိုတဲ့အရာတွေနဲ့ လွဲခဲ့ကြတာနေမယ်….
ဘယ်အရာကိုပဲဖြစ်ဖြစ် အကောင်းဆုံးကိုသာမျှော်လင့်မထားပဲ …
**** မျှော်လင့်မထားခဲ့သောအဆိုးဆုံးဖြစ်ရပ်များသို့ 
ခံစား၊ ဝေမျှ၊ တင်ပြသူက မယ် at 8:54 AM 8 comments
ခံစား၊ ဝေမျှ၊ တင်ပြသူက တားမြစ် ထားသော... at 8:39 PM 10 comments
ကျနော် တကယ်ကို အလုပ်များနေပါတယ်။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် မင်းကွန်းဆရာတော်ထုံး နှလုံးမူကာ “သူများတွေ ကွမ်းစားချိန်၊ ဆေးလိပ်သောက်ချိန်လေးတွေ ရအောင်ယူသလို” ကျနော်လည်း E-Journal အတွက် အချိန်ရအောင်ယူပြီး ပို့စ်ကလေးတွေ တင်သွားမှာပါ။
ကျနော့် အမေရေးခဲ့တဲ့ ကဗျာလေးပါပဲ။
လွန်ခဲ့တဲ့ (၂၅) နှစ်ကျော်ကျော်က ကဗျာလေးပါ။
ကျနော်ဟာ အမေရဲ့သား ဖြစ်ရတာ တစ်ခုတည်းနဲ့တင် ဤကမ္ဘာတွင် ပျော်ရွှင်ဖို့ လုံလောက်နေသူ ဖြစ်ပါကြောင်း ဒီကဗျာနဲ့ ထပ်လောင်း သက်သေပြုခြင်းဖြစ်ပါတယ်…..
ပန်းသမျှပြေ၊ ကန္တာရမှ စိမ့်စမ်းရေ။……….။
ခံစား၊ ဝေမျှ၊ တင်ပြသူက Anonymous at 8:26 PM5comments
ဟေ့ဟေ့၊ ဒါကမ္ဘာ့ရွာကြီးပါကွ (ဆိုရင်ရော)
… မိတ်ဆွေရာ (ကျုပ်လေ)၊
ခံစား၊ ဝေမျှ၊ တင်ပြသူက တားမြစ် ထားသော... at 1:28 AM4comments
ဓါး (သို့) ဆန္ဒ
တ တုံးချင်း တုံးမှာလား
စဉ်း နှီးတုံးပါ သုံးပေါ့ ။
ငါ့မှာ ဘာချို့ယွင်းချက် ရှိလို့လဲ
ကိုယ့် ကိုယ် ကိုပဲ ပြန်ခုတ်မိတယ် ။
ဓါး ကိုယ် စီနဲ့
သူများကို မခုတ်မိဖို့တော့ အရေးကြီးတယ် ။
လက်ဆ ဆိုတာလည်း မှန်းရခက်သား
မခုတ်ရင်လည်း ရှေ့ရောက်မှာ မဟုတ် ။
ဓါးသင်တန်းတွေ မကြာခဏ ဖွင့်လာကြလေရဲ့ ။
ခင်ဗျားကော ဘယ်လိုဓါးမျိုး ရှိချင်လဲ
သံချပ်ကာ အင်္ကျီပါ ဆောင်ထား နိုင်ဖို့ပဲ
ဘယ်ဓါးမှ ကြောက်စရာ မလိုတော့ဘူးပေါ့
ဒါက ကိုယ်ပိုင် အရာတော်တော် များများနဲ့ လဲရမှာ။
ပါ မသွားစေနဲ့ပေါ့ ။
* ရေမီးရှားက သူငယ်ချင်း တစ်ယောက်ရဲ့ ကဗျာလေးကို ကူးယူဖော်ပြပေးတာပါ ။ :)
ခံစား၊ ဝေမျှ၊ တင်ပြသူက တာတူး(၀ါ) အမေ့ခံလူတစ်ယောက် at 7:48 PM6comments
သစ်သီး ကြိုက်တဲ့ လူတွေထဲမှာ
သစ်သီး မကြိုက်တဲ့ သူမကိုတွေ့တယ် ။
ကိစ္စမရှိဘူး . . .
အလင်းရောင် နည်းလေ ပိုလှလေ ။
လက်စွပ်ကို ခိုးရသလို ။
ကြယ်တွေ ကြွေကျတဲ့ ညတစ်ည လိုပဲ
အဲဒီလိုမျိုး ရင်ခုန်ခဲ့တာ ။
ဘ၀မှာ ခဏခဏ ကံကောင်းစရာမလိုပါဘူး
(ဒါပေမယ့်) ဒီတစ်ကြိမ်ထဲပါ ။ ။
ခံစား၊ ဝေမျှ၊ တင်ပြသူက တာတူး(၀ါ) အမေ့ခံလူတစ်ယောက် at 10:29 PM 8 comments
" ပြတိုက်နှစ်ခုနဲ့ ဒိုင်ယာရီ "
ယင်းမာတွေ လှိုင်လှိုင် ပွင့်တဲ့
ကျနော်တို့ ကျောင်း Canteen မှာ
စတင် သာလာခဲ့ . . . . . ။
ဒီလိုနဲ့ . . . . .
ဓားစာခံ အချို့ ရှိလာတယ်
အမိ YTU ရဲ့ ဆင်ဝင်တောင်
ကျနော့် မျှော်စင်ဖြစ်ဘူးရဲ့ . . . ။
. . . . . . . မှာ
စင်္ကြံလမ်းတစ်လျောက်မှာ
သူမ အရိပ်တွေ လိုက်ကောက်နေမိခဲ့ . . . ။
ဒီ . စကားပင်တွေ အောက်ပေါ့
စကားလုံးတွေ လေပြေသိသွားခဲ့ ဘူးတယ် . . . ။
Library ရဲ့ ပြူတင်းလို
ခြွေ လွှင့်ခဲ့တာဘူးကိုပေါ့ . . . ။
အဓိပ္ပါယ်တွေပျောက်ဆုံး . . .
သံစဉ်မဲ့ရပ်ဝန်းက Canteen လေးအတိုင်း
ငြိမ်ငြိမ်လေး . လျောင်းရင်း . . . ဆွေး
အသဲကွဲတေးတောင် ဆို မဖြစ် . . . . . ။
ကျနော့်မှာ . . .
Main Building ထက်က
ကျစ်ဆံလေးကို လွမ်းရဆဲ . . . . . ။ ။
(ဟိုတုံးက ရေးခဲ့ဘူးတဲ့ ကဗျာလေး တစ်ပုဒ်ပါ ။ အမှတ် တရ တင်လိုက်ပါတယ် ခင်ဗျာ။)
ခံစား၊ ဝေမျှ၊ တင်ပြသူက တာတူး(၀ါ) အမေ့ခံလူတစ်ယောက် at 12:35 AM 12 comments
ခံစား၊ ဝေမျှ၊ တင်ပြသူက တာတူး(၀ါ) အမေ့ခံလူတစ်ယောက် at 12:31 AM5comments
ခံစား၊ ဝေမျှ၊ တင်ပြသူက တားမြစ် ထားသော... at 9:21 PM7comments
ခံစား၊ ဝေမျှ၊ တင်ပြသူက Anonymous at 2:59 PM 13 comments
ဒီတစ်ခါလည်း ဗုံသံတွေထဲ ကျွံကျနေတဲ့ ကဗျာအလှကိုပဲ ရွတ်ပါရစေ။
ဒါဟာ ကျနော်တို့E-Journalမှာ ပင်တိုင်ကဗျာရေးတဲ့၊ သူ့ရင်ခုန်သံဟာ “ကဗျာ”၊“ကဗျာ”လို့ထွက်နေရှာတဲ့ ဆရာတောကြောင် နှင့် တောင်းစုတ်၊ပလုံးစုတ်သာ စွန့်ပယ်နိုင်ရှာပြီး၊ E-Journal ကို မစွန့်ခွာနိုင်ရှာတဲ့ ဆရာ သုခမိန် တို့ကို အမှူးထားကာ ကျနော့်ရဲ့ ဝတ္တရားတစ်ရပ်ကို ထမ်းရွက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
အဲသလို (၅) ကြိမ်လုပ်ပါ။
ပြောင်ပြောင်လက်လက်တွေ ဝတ်မထားဘူး ၊
များ များ စား စားကြီး ရှိမနေဘူး ၊
သိပ်ကို အချိုးအစားကျတဲ့ ည
အလင်းတစ်ဝက် ၊ အလွမ်းတစ်ဝက်နဲ့
ဒီညကို မေတ္တာသက်ဝင်မဆုံးပေါ့ ။
ကြယ် ပေါင်း ရံ ခ
ငါ ချက်မစားရက်ပါဘူး ။……….။
ခံစား၊ ဝေမျှ၊ တင်ပြသူက Anonymous at 6:27 PM5comments